JW Mharidzo dzekuenzanisira dzemuna March 2016
SARUDZA MUTAURO Abbey Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Guerze Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuPoland Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Mubvunzo: Makambonzwawo here mashoko aya anozivikanwa nevakawanda?
Rugwaro: Joh 3:16
Zvekutaura: Nharireyomurindi iyi inotsanangura kuti kutambura kwakaita Jesu uye rufu rwake zvinokubatsira sei.
NHARIREYOMURINDI (peji yekupedzisira)
Mubvunzo: Onai mubvunzo uyu nemhinduro dzinowanzopiwa nevamwe. [Verenga mubvunzo wekutanga pamwe chete nemhinduro dziri pasi pacho.] Mungaupindurawo sei?
Rugwaro: Mt 4:1-4
Zvekutaura: Dhiyabhorosi akataura naJesu achimuedza. Izvi zvinoratidza kuti Dhiyabhorosi haasi uipi huri mumwoyo memunhu. Ndezvipi zvimwe zvinotaurwa neBhaibheri nezvaDhiyabhorosi? Nyaya ino inotsanangura zvimwe zvacho.
PEPA REKUKOKA VANHU KUCHIRANGARIDZO
Zvekutaura: Tiri kupa vanhu pepa iri rekuvakoka kumusangano unokosha zvikuru. [Ipa saimba pepa racho.] Musi wa23 March, mamiriyoni evanhu pasi rose achaungana kuti ayeuke rufu rwaJesu Kristu uye kuti anzwe hurukuro yeBhaibheri inotaura kubatsirwa kwatinoitwa nerufu rwake. Hapana mari yamunobhadhariswa. Pepa iri rinoratidza nguva nenzvimbo ichaitirwa musangano wacho. Ndinokukumbirai kuti muuye kana muchikwanisa.
NYORAWO MHARIDZO YAKO
Nyorawo mharidzo yako pachako yomuushumiri uchitevedzera mharidzo yokuenzanisira iri pamusoro apa.
Mharidzo Dzekuenzanisira Dzemuushumiri dzemuna March 2016